इतिहास पो थाहा पाउँनु पर्ने रहेछ – Seeking for an Identity inadynamic world.
“अहिलेको संविधान सातौँ रहेछ भन्ने कुरा त मलाई थाहा नै थिएन। २०७२ सालको पहिलो हो जस्तो लागेको थियो ।” मेरो एक जना साथीले भन्नुभयो । आज दिनभरको राजनितिक गफ-गाफ पछि उनको त्यो उत्तर आएको थियो ।
“धान त फलेको रहेछ । पटक पटक चाहिको धान फैलाउँने कोशिशमा पो लागेका रहेछन यि नेताहरु । के कारणले नेपाली समाजले चाहिएको धान फैलाउँन सकेन तरु धानको बिउँ पो राम्रो थिएन किरु वा त्यो धान फैलाउँने जमिन उपियुत्त थिएन रु” म सोच्दै जमलबाट घर तर्फ लागेँ ।
घर पुगेर भाइसँग अहिलेको देशको अवस्थाबारे सामान्य कुराकानी भयो । आज दिउँसो त रविन्द्र मिश्र र तुलनारायण साहको धेरै कुरा सुनेको । आफुलाई महत्तवपुर्ण लागेको कुराहरु कापीमा टिपेको थिए । पढन थाले ।
संविधान पछाडी इतिहास रहेछ । संविधान बुझ्न इतिहास पो थाहा पाउँनु पर्ने रहेछ । २००४ देखि २०७२ सालको समय रेखामा ७ वटा संविधान । यो समय रेखा भित्र त म पनि जन्मेको हुँ । २०४८ कार्तिक १६ गते देशमा कस्तो राजनितिक माहोल थियो? मलाई जिज्ञासा लाग्यो । तर उत्तर म सँग छैन ।
“म त स्नातक सकेको युवा यस्तो पनि थाहा न हुनुर?” आफैलाई लाज लाग्यो । स्कुलमा हुँदा समाजिक शिक्षा मनै नपर्ने । सँधै कक्षामा निद्रा लाग्ने । यो मेरो र मलाई पढाउँने शिक्षकको ठुलो कमजोरी हो । घरमा पुगेर संसार अर्कै थियो । “पढनु पर्छ र ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ । राजनिती त फोहोर हो । कुरा गर्नु पनि हुन्न । लाग्नु पनि हुन्न । काम नभएका मात्र त्यसमा लाग्ने गर्छन्” यस्तै सोचहरुमा हुर्किदै गए ।
र, सोच्न थालेँ । के सिके? के सिकाइयो?
हामी धनी नेपाली हुन चाहदा रहेछौँ । शिक्षित नेपाली होइन । किन? पहिले देखि हाम्रो घर परिवारहरु अर्थिक रुपमा सुरक्षित हुन चाहना राख्दा रहेछन् । पैसा नभए गाँस, बाँस र कपासको ठेगाना हुँदों रहेनछ । यो कुरा हाम्रो बुबा-आमाले बुझ्नु भएको छ ।
दुःख गरेर हामीलाई पढाउँनु हुन्छ । हामी पढछौँ । पढाइ सकेर जागिर खोज्न लाग्छौँ । सोचे जस्तो जागिर पाउँन पनि गाह्रो हुंदो रहेछ । सबैले अनुभव खोज्दा रहेछन् । बोल्ने देखे लिएर लेख्ने सिपसम्म । तर बिडम्बना हाम्रो शिक्षाको । हामीलाई राम्रोसँग तर्क गर्न पनि सिकाउँदैन रहेनछ । हाम्रो शिक्षाले प्रतिशतको दौडमा छोडदिन्छ । हामी पैसा कमाउँन दौडिन्छौँ । यो दौडमा राजनितीलाई अर्कै मैदानमा राखिन्छ । हामीले नदेख्ने गरी । किनभने हामीलाई आवश्कता नै छैन् ।
हाम्रो आवश्यकता अर्कै छ । हाम्रो घर परिवारमा आफ्नै कथा – व्यथा छन् । आफ्नै संघर्ष छ । हामीलाई राजनीतीका गफ गरेर काम नै छैन । अनि के भयो? हामीले बुझ्न नचाहेको राजनीती हामी भन्दा कम पढेका नेताहरुले पढेँ । राजनितीका हामी अनपढ समुदायमा पर्यो । नेताहरुले इतिहासलाई आफ्नै रुपमा व्यख्या गर्न थालेँ । आफैँ भाषा बनाएर बोल्न थालेँ । हामी ठिक – बैठिक छुटाउँन सकेनौँ । हो , यही कुराको फाइदा थोरै पढेका नेताहरुले उठाएँ । हामी पढेर अनपढ भयो । उनीहरु नपढेर विद्वान बन्न थाले ।
एसएलसि गरेका प्रधानमन्त्री भए । कक्षा ८ पढने सभामुख । योग्यता नभएको कति नेता छन छन । अनि हामीलाई चित्त बुझ्दैन । हामी स्वस्थय मन्त्री डाक्टर हुनुपर्छ भन्छौ । खेल मन्त्री खेलाडी भए राम्रो हुन्थयो सोच्छौँ । अर्थ मन्त्री ठुलो उद्मी हुनुपर्ने कल्पना गर्छौ । तर हामी राजनीतीबाट टाढा रह्न्छौ ।
के हामी शिक्षित नेताहरुबाट नेतृत्व हुन चाह्न्छौँ ? के हामी हाम्रा बाल – बालिकालाई गुणस्तर शिक्षा दिन चाह्नछौँ रु के हामी नेपाल भित्रनै आवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ त ? सुरूवात प्रश्नबाट गरौँ । तेल होइन उत्तर मागौँ । के आझै हाम्रा मधेसका भाइ-बहिनीहरुले हिमालमा पर्ने सगरमाथाको कुरा गर्दा गर्व गर्छन्? के आझै हाम्रो इतिहासमा हामीलाई गर्व छ?
हामी गलत पनी छैनौँ । किन भने हामी आफ्नो घर परिवारलाई सुःख नदिकन , यो देशलाई सुःख दिलाउँन सक्दैनौँ । हामी कहाँ गल्ती छौँ भने हाम्रो सामाज तर्फ चासो राखेनौ । समाजको आमासरहकी राष्ट्रको चिन्ता भएन । राजनितीमा के भयो, त्यो हाम्रो चासोको विषय नै भएन । हामी घर परिवारको जिम्मेवारीमा भुल्यौं ।
अब के तर? के हामी शिक्षित नेताहरुबाट नेतृत्व हुन चाह्न्छौँ ? के हामी हाम्रा बाल – बालिकालाई गुणस्तर शिक्षा दिन चाह्नछौँ रु के हामी नेपाल भित्रनै आवसर सिर्जना गर्न सक्छौँ त ? सुरूवात प्रश्नबाट गरौँ । तेल होइन उत्तर मागौँ । के आझै हाम्रा मधेसका भाइ-बहिनीहरुले हिमालमा पर्ने सगरमाथाको कुरा गर्दा गर्व गर्छन्? के आझै हाम्रो इतिहासमा हामीलाई गर्व छ?
हामीले चाहेर पनी राजनिती शब्द बाट पर बस्ने अबको समय रहेन । भुकम्प देखि नाकाबन्दीसम्म हाम्रो देशमा आएको परिवर्तन महसुस गरौँ । सडकमा निस्काँदा ग्यासको लाइनदेखि हामी गाडि कुर्दाको समय सम्झौँ । के हामीले बुझ्ने र सोच्ने बेला आएको छैन र? यदि अझै राजनिती र हाम्रो जिवनको सम्बन्ध देखन सकेका छैनौ भने हामी आन्धा हौँ । हाम्रो लपरवाहाईले देश यस्तै हुन्छ र भइराख्छ । चासो राख्ने समय भइसक्यो । राजनितीको चासो गर्दैमा पार्टी खोल्नु पर्छ भन्ने होइन । सडकमा आगो बाल्न जानु पर्छ भन्ने पनि होइन ।
यस्को अर्थ संविधान पछाढि इतिहास खोज्नु हो । इतिहास सत्य होइन । इतिहास व्याख्या हो । विभिन्न व्यक्तिको आफ्नै तर्क हुन्छ । कुरा सुन्दा हो जस्तो लाग्छ । तर, अबको समयको माग हामीले सत्य खोज्ने हो । इतिहास पढेर आफ्नो तर्कहरु राख्ने बेला हो । तपाई हाम्रा तर्कले र सोचाईले अबको २५ वर्षको समाजको निर्माण गर्छ । भोली हामीले छोरा छोरीलाई उत्तर दिनुपर्छ । २०७२ सालमा के भयो र तपाई के गर्दै हुनुहुन्थयो । त्यो बेला देश र राष्ट्र बुझाउँन सकेनौ भने हामीले पढेको र सिकेको केही काम लाग्दैन् ।
म इतिहास बुझ्ने र आफुले पढाएका विद्यार्थीलाई बुझाउँने प्रयासमा लाग्ने छु । मैले मेरो कमजोरी बुझिसकेँ तर म बाँच्दा यो कमजोरीलाई मैले सचाउँन सकिन मेरो जिवन अर्थपुर्ण हुने छैन । मेरो मृत्युको बेला मेरो मनमा सन्तुष्टी हुनेछैन । परिवर्तन सानो कुराबाट सुरू हुन्छ, त्यो मलाई विश्वास छ । र, यो सुरुवात म शिक्षक भएर एउटा कक्षाकोठाबाट सुरु गर्दै छु र गर्छु ।
यो लेखे म इमान्दार भएर लेख्दै छु । इमान्दारिता नै मेरो बाटो हो । र यो देश परिवर्तनको साधन इमान्दारिता र जवाफदेइ सरकार नै हो । स्मरण रहोस, हामी अर्थिक रुपमा स्वाभिमान हुन सक्नु पर्छ र साथै यो देश बनाउँने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो ।
(टिच फर नेपाले अाफ्ना प्रज्ञार्थीहरुको नेतृत्व विकासका लागि वर्ष भरी नै विँभिन्न कार्यसाला हरु गरिराख्छ । नोभेम्वर ७-९ २०१५ मा भएको नेतृत्व विकास कार्यसाला पछि शिव कडेंल को रिफ्लेक्सन शिव कडेंल, टिच फर नेपालका प्रज्ञार्थीका रुपमा २०७१ सालदेखि ललितपुरको सिम्लेमा गणित पढाईरहेका छन्)
Published at https://www.teachfornepal.org/bulletin/2015/11/22/Learn-History/
Tagged #reflection, history
Previous postMemorable Interview
Next postIs ItaBad Idea to Pursue MBA?